Iyo software yekushandura roulette zvinyorwa
Kana iwe uri roulette mudzidzi uye uchida shandura zviri nyore zvese zvako zvekushambadzira, Roulette Spin Converter inofanirwa kunge iri pakati pezvishandiso zvako zve analytics.
Ini ndakagadzira chishandiso ichi kunyanya kushandiswa kwemunhu, sezvo dzimwe nguva ini ndichida kukurumidza kuyedza nzira dzinosanganisira kutamba mimwe mikana yeroulette uye nguva imwe neimwe kutanga kubva kune chaiko spin matura akawanikwa pamambure mune manhamba fomati zvichienderana nezvakabuda panhamba dzemunhu mumwe (23, 8, 19, 0, 12, nezvimwe.
Muchokwadi, fungidzira iwe uchida kuyedza nzira pane yechitanhatu: kuva neyekugara zvachose nenhamba imwe chete iripo inofanirwa inosanganisira yakareba nguva yekuongorora, tisingataure kuti pane zvakaomesesa kuverenga kuverenga iko kukanganisa kunogara kwakatenderedza kona!
Kutenda ku Roulette Spin Converter saka zvichazokwanisika kushandura nekukanya zvese zvivakwa zvekutanga zvakatangwa nenhamba imwe chete, mumatura akaumbwa zvakananga kubva kuhunhu hwemikana yatinoda kuongorora.
Kuchinja matura: maitiro ekuishandisa Roulette Spin Converter?
Roulette Spin Converter zviri nyore chaizvo kushandisa: kuburikidza nebhatani mutoro kuruboshwe zvinokwanisika kurodha kana kuchengetedza dura mune zvinyorwa faira fomati.
Wobva wasarudza iyo fomati yatinoda shandura nhamba dzakasimudzwa; zve oparesheni iyi iwe unogona kusarudza pakati peanotevera manomwe sarudzo:
Kana izvi zvangoitwa tinya bhatani pindura uye, regerera pun ... ndizvozvo!
Roulette Spin Converter: kutumira kunze iyo data
Iyo yekusingaperi yakashandurwa uye yakagadzirira kuponeswa ichaonekwa kurudyi kwechirongwa (bhatani Save kurudyi) mune txt zvinyorwa fomati, iyo inogona zvakare kugadziriswa kuburikidza neExcel kana zvimwe zvirongwa.
Uye kana isu tichida kugadzira yekunyepedzera-kusingagumi kusingaperi, ingoisa iyo nhamba yezvipenga kuti ugadzire uye tinya bhatani RND Gen.
Nebasa iri unogona zvakare kugadzira kusara usina zero, mune ino bhokisi rakakodzera rinofanira kutorwa Dzinga zero.
Sezvauri kuona, iko kusununguka kwekushandisa kwechirongwa kunoenderana zvakananga nekubatsira kwayo uye pamusoro pese kune iyo nguva iyo inokusevha iwe kana uchifanirwa kuyedza roulette system inoenderana neimwe yeiyo manomwe anowanikwa mikana. Chii chauri kumirira kuti utore kubva pane iyi link iripazasi?